Iikhosi ze-3D zoLuntu-iGeofumadas
Ikhaya/Iikhosi zeLizwe 3D
Ikhosi ye-3D yaseburhulumenteni-Ingcali kwimisebenzi yoluntu
I-AulaGEO inikezela ngeseti yezifundo ezi-4 ezibizwa ngokuba yi- "Autocad Civil3D yeTopography kunye neMisebenzi yoLuntu" eya kukuvumela ukuba ufunde indlela yokusingatha le software ye-Autodesk emangalisayo kwaye uyisebenzise kwiiprojekthi ezahlukeneyo nakwiindawo zokwakha. Yiba yingcaphephe kwi…
Amanqaku, umphezulu kunye nolungelelwaniso. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yemigca kunye nesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswa kwiTopography kunye neMisebenzi yoLuntu Lo ngowokuqala kwiseti yezifundo ezi-4 ezibizwa ngokuba yi "Autocad Civil3D for Topography and Civil Works"...
Iindibano, umphezulu, amacandelo anqamlezayo, i-cubage. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi eyisiseko ehambelanayo kunye ne-Autocad Civil3D software esetyenziswe kwiTopography kunye neMisebenzi yoLuntu. Le yinto yesibini kwiseti yeekhosi ezi-4 ezibizwa ngokuba yi "Autocad Civil3D for Topography and Civil Works"...
Ulungelelwaniso oluphezulu, umgangatho, amacandelo anqamlezayo. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yemigca kunye nesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswa kwiTopography kunye neMisebenzi yoLuntu.
Iinkcazo, ukuhanjiswa kwamanzi acocekileyo, iiplani, iindlela zokuhlangana. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yemigca kunye nesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswa kwiTopography kunye neMisebenzi yoLuntu Le sesine iseti yezifundo ezi-4 ezibizwa ngokuba yi "Autocad Civil3D for Topography and Civil Works" ezithi...